मल्ल के. सुन्दर - कान्तिपुर समाचार
‘सरकारले समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको छ । समानता र समृद्धिलाई पृथक् राखेर हेर्‍यो भने त्यो निरर्थक र नकारात्मक समानता हुन्छ ।’ पुष्पलालबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको लेखको अंश हो यो । विकास र समृद्धिको सफलताको कसी समानता रहेको मान्यतामा प्रधानमन्त्री पनि सहमत रहेको सार्वजनिक पुष्टि हो यो ।
गुठी हरण संस्कृति मरण
जतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गुठी परम्पराद्वारा संवर्द्धिन र संरक्षित एउटा जीवित लोकसम्पदा भोटो जात्रामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन जाँदै थिइन्, ठीक त्यही बाटोको अर्को छेउ माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका गुठियारहरूमाथि राज्यले निर्मम दमन गर्दै थियो । जेठ २६ गते उपत्यकाको परिदृश्य उदेकलाग्दो थियो ।
समृद्ध र सुखी नेपालको युटोपिया
सुरक्षा सबै प्राणीका लागि पहिलो प्राथमिकता हो । प्राणीमध्ये सचेत र संवेदनशील मानिएको मानिस चाहिँ सुरक्षाका अतिरिक्त सुविधा र सुखको खोजीमा पनि हुन्छ । महान् दार्शनिक अरस्तुको बुझाइ पनि यस्तै छ । उनले भनेका छन्– सुख नै जीवनको उद्देश्य हो । मानव जीवनको पूर्ण उद्देश्य र अभीष्ट यही हो ।
वार्ता, केवल वार्ता !
नेपाली राजनीति फेरि नौलो किसिमबाट तरंगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्धको घोषणा राजनीतिक चर्चाको चुलीमा छ । सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको यस किसिमको नीतिप्रति आलोचना र असन्तुष्टका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
मंसिर २९, २०७५
मानिस–मानिसबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील भइदिने क्षण भनेको मृत्युको अवस्था हो । त्यसमा पनि अन्तिम संस्कारका लागि पुर्‍याइने मसानघाटमा मृतकका आफन्त मात्र होइन जीवनभर दुस्मनी रहेका मान्छेको ह्दय पनि उद्वेलित हुन्छ ।
मल्ल के. सुन्दरका लेखहरु :
शिक्षणमा एकल भाषा नीति
बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला सकियो । कांग्रेसभित्रकै गैरसंस्थापन पक्षहरूले सोचेजस्तो भेलालाई आफ्नो रणनीति अनुसार अनुकूल पाए–पाएनन्, सम्बन्धित पक्षले मूल्याङ्कन गर्दै गर्लान् । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राहतको अनुभव गरे । यस भेलाले कांग्रेसको अबको इतिवृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन ।
यो कस्तो समाजवाद ?
जेष्ठ १५, २०७५
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको एकमात्र लक्ष्य हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मू्ल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादी अवस्थासम्म पुग्ने प्रतिबद्धता नै यस संविधानद्वारा निर्दिष्ट बाटो हो ।
बाङ्गेमुढाका केशरबहादुर र सन्देशगृह
ठमाडौंको तीनधारा पाठशालाको छुट्टै पहिचान र इतिहास छ, नेपालको राजनीतिमा।
अबको यक्ष प्रश्न– हामी आफैंलाई
बलिदान, त्याग, समर्पण, सेवा भावको शब्दार्थ शब्दकोशमा त हामी पाउँछौं । तर राजनीतिक वृत्तमा अहिले यिनका कुनै अर्थ छैनन् । २००७ सालको जनक्रान्तिको कुरा अलि पुरानो भयो होला अहिले ।